The MacBook nke abụọ na ndepụta nke ngwaọrụ kachasị atụ anya maka ekeresimesi a | Esi m mac
The MacBook nke abụọ na ndepụta nke ngwaọrụ ndị kachasị atụ anya maka ekeresimesi a
O doro anya na oge ịzụ ahịa abịawo na agụụ mgbe ha hụsịrị ọnụ ọgụgụ maka Black Friday na Cyber ​​Mọnde. Ugbu a ọ dịịrị nyocha iji họrọ onyinye kachasị chọọ maka ụbọchị ndị a, ọ bụghịkwa ihe ijuanya ịchọta iPhone n'elu ndepụta ndepụta a, mana ọ bụghị ihe ijuanya na MacBook nọ n'ọnọdụ nke abụọ dịka ụlọ ọrụ ahụ kwuru. Piper jaffray.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ngwaahịa dị mma na-egosi na ndepụta a ebe ọ bụ na ọ bụghị maka ịhụ ahịa, ego etolitere ma ọ bụ nọmba gọọmentị, ọ bụ usoro nke ngwaahịa ndị ọrụ chọrọ ka ha nye maka ụbọchị ndị a.
Nke a bụ ndepụta mere na ọ na-egosi MacBook na ọnọdụ nke abụọ mgbe iPhone, nke bụ onyinye na ọtụtụ ndị na-aza ajụjụ yiri ka ha ga-atụ anya ya. Na nke atọ na-egosi Xbox console nke karịrị PlayStation na 0,6% na mgbe ahụ GoPro, wdg.
Eziokwu ọzọ dị omimi bụ na smartwatches gosipụtara nke ọma (na-enweghị ịkọpụta akara ma ọ bụ ihe nlereanya) na nke a bụ ihe anyị masịrị. Ma MacBook anyị pụrụ ịhụ progression ha nwere kemgbe 2013, nke ọ bụ ezie na ọ bụghị kwa nnukwu, na ndị ọrụ na-arịọ maka Mac dị ka onyinye maka ekeresimesi a.
Ọbịbịa nke ọhụrụ MacBook Pro nwere ike inwe ihe jikọrọ ya na nyocha a, mana enweghị nkọwa a kapịrị ọnụ na ụbọchị edechara ndepụta a, anyị amaghị ma ọ bụrụ na e gosipụtara ngwaọrụ ọhụrụ ahụ. Ugbu a, anyị kwesịrị ịdị mma ma nwee olile anya na ha ga-enye anyị ndị anyị rịọrọ maka ụbọchị ndị a pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » The MacBook nke abụọ na ndepụta nke ngwaọrụ ndị kachasị atụ anya maka ekeresimesi a
Na akwụkwọ ahụ aja na Mac na Google+
Fantastical 2 ka emelitere maka inye nkwado maka Ogwe Touch